Famoronan-kira eto Madagasikara Tsy ampy ny fitaovana hampiroboroboana azy
Faha-30 taonan’ny Faribolana sandratra Nitombo avo 100 heny ny isan’ny mpikambana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha omaly ny ivon’ny fankalazana ny faha-30 taona nisian’ireo Poeta sy mpanoratra mikambana eo anivon’ny Faribolana sandratra.
Zanaka ampielezan’i Fandriana Hitahiry ny asa soratra rehetra
Maro be ny tantara mampalaza an’i faritr’i Fandriana. Na ny anaran’ny tanàna sy ireo mpanjaka nifandimby, ohatra, dia efa betsaka no azo tantaraina, hoy ny filoha nasionalin’ny Amicales des Natifs de Fisakana (ANF).
Teatra Ambatovinaky Feno 120 taona amin'ity taona 2019 ity Teatra Ambatovinaky Feno 120 taona amin'ity taona 2019 ity
Ny 14 septambra 1899 no notokanana ny “Théâtre Municipal de Tananarive” izay fantatra tamin'ny hoe : Teatra Ambatovinaky. Ny “Opérette LA MASCOTTE” noforonin'i Edmond Audran tany amin'ny taona 1880 no nanokafana azy ka ny Tropy DURU ET CHIVOT no nisehatra ny tantara.
Taom-bavao iraisan’ny Malagasy 2019 Efa nalefa any Toamasina ny tsangambaton’ny firaisam-pirenena
Notontosaina tamn’ny alarobia 11 septambra lasa teo tao anatin'ny miaka-bolana ny fangatahan-tsodrano sy fanasinana ny vato fehizoro hatsangana ao amin'ny renivohitr'i Toamasina izay handray ny
Fifaninanana mandraharaha ara-kolontsaina 20 tapitrisa ariary no loka ho an’ny voalohany
Nampahafantarina tetsy amin’ny Café de la Gare Soarano ny fisokafan’ny fisoratana anarana nanomboka omaly ho an’ireo izay te handray anjara amin’ny fifaninanana tetikasa
Sary hosodoko Mampahafantatra ny asa tanany etsy Andavamamba Raparivo
Mahatratra 2.400.000 Ar ny lafo indrindra amin’ireo sary hosodoko asa tanan-dRapanarivo haranty sy hamidy etsy amin’ny AFT Andavamamba nanomboka omaly.
Ofisim-pirenena misahana ny sarimihetsika Hiroso amin` ny fanovana
Nankatoavin` ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny didy hitsivolana 2019-008 manafoana ny lalàna 2011-007 natolotrin` ny ministeran` ny serasera sy ny kolotsaina mba hifehezana ny tontolon`ny sarimihetsika teo Mada.
Anio alina no hanatanteraka seho miavaka nampitondraina ny lohateny hoe “Soavaly metaly” etsy amin’ny Plaza Ampefiloha ny tarika kalazan’ny Rock Malagasy, Kiaka.
Hampiavaka ity seho ity ny fihainoana fotsiny ireo hira nahafantarana ny tarika hatramin’izay, izany hoe, tsy voatery hitsinjahana fa ny lafiny tononkira kokoa no tena natao hankafizina. Ilaina ny fametrahana ivontoerana lehibe natokana hampiroboroboana ny zava-kanto eto Madagasikara, hoy ny mpandraharaha, Tantely Ravoanary. Manomboka mipetraka amin’ny toerany ny lanjan’ny famoronan-kira fa sakana ny tsy fahampian’ireo fitaovana hahafahana manasongadina ny asan’ireo mpanakanto, hoy ity mpandraharaha nisafidy ny hanohana ny tarika ity. Mila fifanomezan-tanan’ny rehetra ny fanandratana ny kolontsaina malagasy, hoy hatrany izy.